VLC waa transcoder lacag la'aan ah iyo ciyaaryahan multimedia in lagala soo bixi karaa Videolan.org ah. Waa ciyaaryahan music computer taageera taageeraan qaabab file badan oo ay ka mid yihiin M2TS iyo MTS lala footage AVCHD. Advanced Video codec Qeexid High soo gaabiyo AVCHD, waa nooc ka mid ah qaab file in ay diyaariyeen Panasonic iyo Sony. Sidaa darteed kaamirada ama kaamirooyin HD ka soo saaray shirkado Kuwaas videos leh qaab AVCHD. Sidaa darteed videos waxay u baahan yihiin in la diinta qaabab kale oo waxaa taageera hindisooyin badan. The qaabab heerka caadiga ah in daaqadaha taageeraan yihiin wmv iyo AVI. Waxaad isticmaali kartaa VLC si loogu badalo files AVCHD qaab kasta oo ay taageerayaan VLC.
Kuwa soo socda waa faa'iidada isticmaalka Converter VLC:
Taageerada tiro balaadhan oo ah video iyo maqal ah qaabab
Converter Good oo taageero hotkey
Easy in ay isticmaalaan interface iyo muuqaalada
Aad miisaanka yar oo dabacsan
Lagu daro karaa channels geeyo bogga internetka
Sida loo ciyaaro AVCHD Videos la VLC
Talaabada 1: ka Videolan.org download software VLC. Ku rakib file ka soo bixi galay your computer iyo abuurtaan software marka rakibaadda waa dhameystiran yahay.
Talaabada 2: Isticmaalka cable camera ah, xiriiriyaan fiidiyo ama camera AVCHD la your computer. Daar camera aad oo waxay ag qotomiyeen in ay 'hab loo maqli karo. Sug sahamisa daaqadaha si loo ogaado qalab aad. Marka camera aad la ogaado, u tag qaybta "My Computer" iyo furi camera by double riixaya icon qalabka. Waxay ku taallaa file AVCHD in aad rabto in aad ciyaaro iyo jiidi oo hoos galay desktop computer ama folder kale oo gaar ah oo aad u doorato. Haddii kale, waxaad riixi kartaa batoonka 'warbaahinta' on geeska bidix ee kore ee interface VLC ka dibna riix badhanka 'file u furan'. Markaas waxaad u tegi kartaa si toos ah meesha file AVCHD iyo dooro file ka dibna riix 'furan. "
Talaabada 3: Talaabada 3: aad AVCHD Faylal ay si toos ah u bilaabi doonaa inuu u ciyaaro ka dib markii gujinaya ah 'furan' button.
Sida loo badalo AVCHD Videos la VLC
Talaabada 1: Riix tab la odhan jiray "Media" oo ku yaalla sare ee interface ciyaaryahanka VLC Media ee. Dooro ikhtiyaarka "Save / badalo." Soco geeska bidix ee kore ee VLC ciyaaryahan warbaahinta iyo riix "File" tab.
Talaabada 2: Riix ah "Add" button helay dhanka midig ee Media VLC ka Player interface si ay u helaan screen raadinta arbushin ilaa qaybta muujinaya kooban drive adag. Dooro icon muujinaysa file AVCHD aad la doonayo iyo guji "Open" button inay ku shuban file AVCHD aad la doonayo in ay suuqa kala Open Media. Guji "Save / Beddelaan" badhanka ku yaal geeska hoose ee midigta ah interface VLC ah si ay u helaan suuqa kala badalo ah.
Talaabada 3: riix sanduuqa hoos-hoos loo magacaabay "Profile" iyo dooro VLC saarka la eego aad doorato. Waxaa jira dhawr fursadood oo ay ka mid yihiin MPEG-2, wmv, MPEG-4, ASF iyo kuwo kale oo badan kasta oo loogu tala galay noocyada Deji iyaga u gaar ah.
Talaabada 4: Waxaad go'aansan kartaa si ay u tagaan goob ka horumarsan oo waxaa beddeli goobaha qaar ka mid ah. Waxaad sidoo kale la abuuro laga yaabaa in aad u gaar ah profile si uu u qabto wax soo saarka aad video. Taas waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya icon kiyaawe ku yaal dhinaca midig ee sanduuqa magacaabay "Profile." Dooro ah Encapsulation Audio heli karo, codec video iyo Qaabka. Waxaad samayn kartaa goob badan oo horumarsan xilligan la joogo. Riix badhanka "Save" si loo badbaadiyo isbedel ah in aad sameeyey aad file iyo inuu ku soo laabto screen loogu badalo ka.
Talaabada 5: Guji "Browse" badhanka ka helay duurka meel loo ahaadana iyadaa ciyaaryahan interface VLC Media ee ay u doortaan badbaadin folder computer aad file gediyay ah. Magaca faylka badaley. Hubi in ay ku riday kordhin file qaab ah in aad hore u doortay. Riix badhanka "Save" inuu ku soo laabto qaybaha suuqa kala badalo.
Talaabada 6: Guji "Start" badhanka ku yaal geeska hoose ee midigta ah interface VLC ah u bilowdo hawsha wada hadalka.
Converter kale si VLC
Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo files AVCHD halkii la isticmaalayo VLC media player.
Wondershare Video Converter Ultimate Ku guuleystay in ka badan Converter VLC. Waxaa qoreysa qalab video xoog badan oo aan kaliya ciyaaro, edit iyo beddelid files AVCHD, laakiin sidoo kale la iman video tafatirka qalab dhameystiran oo qabta hawlo aan xad lahayn. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, aad edit karaa, loogu badalo, download, abaabulo, kor loogu qaado, qabashada iyo daawato videos in ka badan 150 qaabab. Wondershare Video Converter Ultimate Duwan VLC media player Converter taageertaa dhammaan faylasha AVCHD ka dhan kaamirooyinka.
Conversion Dufcaddii ✓ ✗
Tayadoodii u kombuyuutarrada gacanta ✓ ✗
Degsado Online Videos ✓ ✗
Guba Videos in DVD ✓ ✗
Video Ciyaar ✓ ✓
Luqadaha Ingiriisi, Isbaanish, Jarmal, Faransiis, Chinese Trad, Talyaaniga, Japan, Portuguese English, Japan, Deutsch, iyo Faransiis, Jarmal
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play iyo Beddelaan AVCHD Faylal ay la VLC